Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey shirka wadatashiga, xasuuqa shacabka ay kuhayaan ururkii dhawrka koox u kala jabay ee Shabaab iyo abaaraha.
Wararkii ugu danbeeyey shirka wadatashiga, xasuuqa shacabka ay kuhayaan ururkii dhawrka koox u kala jabay ee Shabaab iyo abaaraha.
Somaliya:- Jahwareer aan walito soo shaac bixin oo ka taagan qaabka loo maareynayo shirka wadatashiga oo ay ka muuqato deg deg aan caadi aheyn. halka dilalka ay kooxda Shabaab shacabka ku hayaan oo la xaqiijiyey iney tahay waanu joognaa walito.xageeyse marayaan gurmadkii abaaraha mar hadii aduunyadii malaayiin dolar ay gacantooda galisay TFGda?
Shir ay iskugu imaanayaan Somaliweyn oo looga hadlayo mustaqbalka dalka ma u muuqdaa shirka uu Mahiga ugu magac daray wadatashiga ayey leeyahiin Somali badan. qoys Somaliyeed ayaa marka ay doonayan iney aroosaan ayaa qaban qaabadooda laga dareemaa dhawr bilood hadaba shirkani loogu magac daray wadatashi ee hadane labada maalmood ookaliya la iclaamiyey ma yahay mid waqtigiisii la joogo ayuu yiri Shiikh Cabdullaahi oo ka mid ah culimada Somaliyeed. hadaba kama hor dhaceyno meesha uu ku danbeyn doono shirkaasi hayeeshee arimo badan oo hada aan walito soo shaac bixin inta ay banaanka ka imaanayaan kama hor dhaceyno inkasta oo ay wax badan isbedeli karaan oo sida hada ina soo gaareyso hadiishirku sida hada lagu wado wax badan laga bedeli waayo laga yaabo iney shaqadooda iska casilaan masuuliyiin naga codsaday in aanu magacooda sheekin inta lag agaarayo qaabka uu u dhici doono shirka xawaaraha ku socda ee qeyb ka mid ah bulshada loo iclaamiyey, ileen hadey u dhan yahiin qaban qaabadan wuu ka weynaan lahaaye.
Shabaab iyo dilalkooda
Shabaab oo dilalka ay ka wado qeybo badan oo ka tirsan koofurta Somaliya lagumacneeyey ha nala arko waanu joognaaye kedib markii ay shacbakii Somaliyeed dhegaha ka fureysten kana tashadeen ineyba kooxdaasi u arkaan koox diin shaqo ku leh.
Abaaraha Somaliya iyo macaluusha.
Xiliyadii hore marka masiibo noocaani oo kale ah timaado waxkasta oo markaasi jiray dib ayaa loo dhigan jiray hada maanta arimahaasi oo dhan meesha ayey ka baxeen waayo hadiiba shacab Somaliyeed laga naxayo caasimadii Somaliya qaxooti kuma ahaan laheyn.
Al muhiim Shacabka Somaliyeed wey u baahan yahiin shirweyne dib u heshiisiin waxuuse muran ka taagan yahay waqtiga shirkaasi ku haboon inuu hada yahay iyo in xili ay shacabku ka nolol wanaagsan yahiin mida ay maanta kujiraan. inkasta oo nabad iyo colaadba ay adag tahay in reer kasta oo Somaliyeed loo helo siduu jecel yahay ilaa wadanka laga saaro xiliga kumeel gaarka ah.
Shirka Mogdisho hadii uu dhaco 4 ilaa 6 waxuu salfan doonaa masuuliyiin badan oo manta TFGda ku jirta waxaana laga dhaxli doonaa kala fikir duwanaansho ugu danbeyn lagu kala tagi doono.
· admin on September 02 2011 10:27:07 · 0 Comments · 1778 Reads ·
14,579,369 unique visits